I-Tandsgård bed and breakfast - I-Airbnb
I-Tandsgård bed and breakfast
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguInger
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi aliqela enendawo yayo yokungena nenendawo yokupaka. Iflethi isecaleni kwegumbi lokuhlala kwifama yethu.
Kwiflethi kukho indlu yangasese neshawa, kunye nefriji nezinto zasekhitshini. Igumbi linamagumbi aliqela ibe linebhedi entle nesofa etofotofo.
Awekho amaphepha kwincwadi, kukho iTV neintanethi efumanekayo.
Apha efama sigcina iingulube, iigusha, iinyosi kunye neenkukhu. Siphila ekubeni ngamafama ngoko sisebenza yonke imihla nezilwanyana zethu. Lusuku oluvuyisayo lokuhlala kule flethi okanye indlu ekwicomplex ukuze uqonde.
Kwifama yivenkile encinci efama enezinto ezahlukahlukeneyo ezenziwe ekhaya ezifana nobusi, i-jam, i-granola, izikhumba zegusha, kunye neengubo. Amaxesha onyaka adla ngokubona izinto ezahlukileyo onokukhetha kuzo kwivenkile.
KwiTandslet, apho sihlala khona, kukho ivenkile yokutya (umgama we-1 km), bathengisa isonka esivela kumbhaki wasekuhlaleni eSkovby (umgama weekhilomitha eziyi-7). Yikhilomitha eziyi-5 ukuya elunxwemeni eMommark Marina , apho uza kufumana indawo encinci yokutyela. Ukuba ufuna ukuthenga, yiya kwivenkile yokutyela, okanye utye kwivenkile yokutyela, imalunga neekhilomitha eziyi-14 ukuya eSønderborg.
Umbuki zindwendwe ngu- Inger
Sinikezela ngeendawo zokuhlala ezinesidlo sakusasa okanye ezingenasidlo sakusasa. Isidlo sakusasa sibiza i-NOK 60 umntu ngamnye ngosuku.
Ixesha elininzi iqulethe:
I-jam eyenziwe ekhaya, itshizi, ubusi bethu, iveranda okanye i-yogurt, isonka esenziwe ekhaya, ukusika okubandayo, ikofu, iti, ubisi kunye nejusi.
Ukuba unezinto zokondlula ibhedi ezingaphezu kwezimbini, singakunceda ngezinto zokondlula ibhedi ezingakumbi.
Ixesha elininzi iqulethe:…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sydals